लकडाउनका बेला मलामी संख्या १२ जनामात्र निर्धारण | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : २५ चैत्र २०७६, मंगलवार १८:३६
सिरानचोक गाउँपालिका ७ उपल्लो गोहोरेकी ९७ बर्षीय श्रीमाया भट्टको सोमबार राती निधन भयो ।
मंगलबार बिहान कोरोना प्रतिकार्य समितिको बैठक बस्यो र मलामी जम्मा १२ जना मात्र जाने निर्णय ग¥यो । निर्णय अनुसार भट्टको दरौंदी नदीमा लगेर दाहसंस्कार गरियो ।
बाँकी रहेका छरछिमेकले घरमै सघाउने निर्णय गरिएको वडा अध्यक्ष सुरज ढकालले जानकारी दिए ।
‘उपल्लो गोहोरेमा करिब एकसय घरधुरी छ । यसअघि सयडेढसय जना मलामी जाने चलन थियो’, वडाअध्यक्ष ढकालले भने, ‘तर अहिले कोरोना संक्रमणको त्रास छ । लकडाउन गरिएको छ । सामाजिक दुरीको व्यवस्था छ त्यसैले स्थानीय कोरोना प्रतिकार्य समितिले मलामीको पनि संख्या निर्धारण गरेका हुन् ।’ आगामि दिनमा कसैको मलामी जानु परे पनि १२ जना मात्र जाने उनले बताए ।
सो वडामा २४ वटा प्रतिकार्य समिति छ । गाउँपालिकाभरि एकसय ४८ वटा प्रतिकार्य समिति छन् । समितिले लकडाउनलाई कडाइका साथ कार्यन्वयन गरिरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु गुरुङले जानकारी दिए ।
गाउँका मान्छे पनि बाहिर नजाने र बाहिरका मान्छेलाई पनि गाउँमा प्रवेश निषेध गरिएको उनले बताए । पाहुना आए पनि १४ दिन क्वारेण्टाइनमा राख्ने अथवा फिर्ता जाने प्रस्ताब गर्ने गरेको उनले बताए । सो व्यवस्थाका कारण पाहुनाहरु पनि नआउने गरेको अध्यक्ष गुरुङले बताए ।